Ny Semalt Expert dia mamaritra fomba 10 hanatanterahana ireo fitaovana fandinganana tranokala
fomba hanatanterahana asa iray manokana. Saha amin'ny sehatra iraisam-pirenana amin'ny fivoaran-draharaha mavitrika, fanombohan'ny amboarampeo sy ny fandrosoana goavana eo amin'ny sehatry ny fahaiza-manavaka, ny fifandraisana amin'ny olombelona, ​​ary ny fanitsiana lahatsoratra. Ny fitaovana enti-tranonkala amin'ny tranonkala dia mamoaka, maka download ary mamoaka ireo angon-drakitra voafidy, manome anao format malalaka. Ny fitaovana samihafa dia ahafahanao manangona angona avy amina anaran-tserasera maromaro ao anatin'ny segondra. Ireto misy fomba sasantsasany ampiasana fitaovana fandinganana tranonkala.
1. Ny votoaty sy ny mpanaraka
Ireo bilaogin'ny mpifaninana sy ny mombamomba ny media sosialy dia toerana tsara handinihana ny votoaty. Angamba, hanokatra ny varavarana ho anao ny fampiasana teknolojia hôpitaly ary hanamboatra ny fototry ny mpifanandrina aminao. Azonao atao koa ny mahita ny mpanara-dia maro azy ary firy ny olona mijery sy mankafy ny pejiny. Ny angon-drakitra mahaliana dia afaka manampy anao hanangona vaovao momba ny mpifaninana aminao, manome ny marika bebe kokoa amin'ny media sosialy sy mitondra fiara bebe kokoa amin'ny tranokalanao.
2. Ny fanandramana
Ny fikarakarana tsara dia hanampy, hamantatra, hikapoka ary hahazo fampahalalana avy amin'ny tranonkala samihafa. Afaka mitandrina mora foana ny rantsan-tànana izahay eo am-pelatanan'ny mpifaninana aminay ary hahafantatra ny vokatray, ny fampielezan-kevitra, ny bolongana ary ny paikady ara-barotra. Amin'ny alàlan'ny angon-drakitra tsara dia afaka manitsy ny paikady momba ny varotra isika ary io fiovana io dia azo antoka fa hahasoa ny orinasa.
Afaka manangona vaovao mahasoa avy amin'ny Yelp, Google, Trustpilot, TripAdvisor, Zomato, Amazon ary Yahoo toy ny orinasa goavambe no nandinika azy ireo. Mankanesa ao amin'ny tranonkalan'ny tambajotra sosialy ary tadiavo ny marika na ny vokatra mba hahazoana vaovao mahasoa mba hikororosy. Ireo fampahalalam-baovao voaratra dia azo ampiasaina mba handoavana ny fahalemen'ireo mpifaninana, ny fitarainana ary ny olana.
4. Fanamafisana ny vidiny
Azonao atao ny manangona tahirin-kevitra momba ny fampitahana vidiny sy ny fitadiavana. Zava-dehibe ny mahafantatra izay sanganasan'ny mpifaninana aminao amin'ny vokatra manokana sy ny hamaroan'ny vokatra mitovy amin'ny tranonkala. Ny fampitaham-barotra dia manan-danja ho an'ny mpivarotra an-tserasera, ary ny angon-drakitra dia ny hany fomba azo ampitahaina amin'ny vidiny kokoa. Ohatra, ny rojom-pivarotana fivarotana (Sainsbury, Waitrose, ary Tesco) dia mampiasa ny tranokala ho toy ny tsy maintsy ampahany amin'ny teti-bola vidiny..Manasokajy zavatra maro isanandro izy ireo ary ampiasao ity fampahalalana ity mba hampitaha ny vidin'ny vokatra isan-karazany.
5. Fomba fitadiavana fikarohana
Ny fahatongavana mankany amin'ny tranokala dia tonga amin'ny alalan'ny fantsona samihafa, toy ny fifamoivoizana, ny fifamoivoizana amin'ny media sosialy, ny mailaka, ny famerenana sy ny hafa. Ho an'ny ankamaroantsika dia fikarohana organika izay manolotra ny ampahany lehibe amin'ny kitapo. Saingy ho an'ny hafa dia tsy midika na inona na inona ny fifamoivoizana ary mifantoka amin'ny fanatsarana ny fikarohana izy ireo noho ny tetikady hafa.
6. Fikarohana momba ny tsena
Fantatry ny mpandraharaha rehetra fa ny fikarohana ara-barotra dia ampahany manan-danja amin'ny orinasa. Tsy maintsy mamantatra ny fahafahana, ny fironana ianao ary ny fandrahonana amin'ny alalan'ny fikarohana momba ny tsena. Raha vantany vao voarakitra avy amin'ireo tranonkala mpifaninana ireo angon-drakitra, mora foana ny fampahalalana rehetra, ary azonao fantarina ny fomba hampitomboana ny raharahanao amin'ny fikarohana ara-tsosialy. Ny mpandika tranonkala dia afaka manaisotra ny angon-drakitra ilaina avy amin'ireo orinasam-pikarohana ara-barotra, ireo mpampiasa nomerika, ireo torolàlana an-tserasera, ireo tranokalam-baovao ary ireo blaogin'ny orinasa. Afaka manararaotra ireny data ireny ianao ary manitatra ny tambajotra manerantany.
7. Fitadiavana an-tsokosoko
Raha mitady asa vaovao ianao, dia tokony hokaravasainao amin'ny toeram-pivarotan-jatony, tranonkala media sosialy, ary forums. Azonao atao ihany koa ny mahazo fampahalalana mahasoa avy amin'ny vohikala nomerika sy lisitry ny lisitra. Ary raha mitady kandidà mety amin'ny orinasanao ianao dia afaka manova ny angon-drakitra ary manasitrana ny valiny mifototra amin'ny zavatra takinao. Amin'ny lafiny iray, ny fitaovana enti-manamboatra tranonkala dia hahazo fampahalalana mahasoa momba ny zava-mitranga ao amin'ny tsenan'ny asa, ny fomba hanofana ireo kandidà mendrika sy ny fomba hiasana asa nofinofy.
8. Ny vokatra sy ny tolotra
Isika rehetra dia mividy vokatra sy serivisy ao amin'ny Internet. Amin'ny maha-mpanjifa azy dia afaka manaparitaka sy manangona ireo torolàlana hahazoana vaovao mahasoa. Azontsika atao ihany koa ny mampitaha ny vidiny sy ny fanadihadiana mba hahafantarana hoe inona ny vokatra sy ny serivisy no mety indrindra. Ohatra, azonao atao ny manangona ny lisitr'ireo fiara ampiasaina izay mifanaraka amin'ny zavatra takinao amin'ny toerana samihafa. Azonao atao ihany koa ny manamarina ny fanamarinan'ireo smartphones samihafa mba hahafantarana hoe iza no tompon'andraikitra amin'ny marika. Ny sasany amin'ireo safidy tsara indrindra dia ny iPhone, Windows Mobile, ary BlackBerry.
9. Toeram-piasana ara-bola
Amin'ny alalan'ny fitaovana fandinganana tranonkala dia azonao atao ny manangona tahirin-kevitra avy amin'ny varo-bidy, tranokala, ho an'ny tombony ara-bola. Ho mora aminao ny hanangona angona nangatahinao mba hijanona ho fantatra momba ny fironana ara-barotra amin'izao fotoana izao.
10. Mikasa ny hividy na hividy
Mba hahafantarana bebe kokoa ny fanasitranana ny tranonkala, tokony handinika ireo masoivoho momba ny fampiantranoana ianao. Raha mitady hividy na hanofa zavatra ianao, dia tena mila manaloka ny angona ianao ary manana hevitra momba ny karazam-barotra mety aminao indrindra. Amin'ny maha-mpihazakazaka ao an-trano azy, dia afaka mamorona tahiry voaomana tsara avy amin'ny tranokala isan-karazany, lisitra, tranokala Source .